Wafti ka socda Dawlada Dalka Kenya oo Baydhabo soo gaadhay | maakhir.com
Wafti ka socda Dawlada Dalka Kenya oo Baydhabo soo gaadhay
Baydhabo:- Wararka haatan naga soo gaadhaya magaalada Baydhabo ee xarunta u ah Baarlamaanka Dalka Somaliya ayaa waxay tibaxayaan inay goor dhawayd garoonka Magaalaasi ay ka soo degeen wafti balaadhan oo ka socota Dawlada Dalka Kenya, waftigaas ayaa waxa la sheegay inuu hogaaminayo Danjiraha Somaliya ee Dalka Kenya waxana halkaasi ku soo dhaweeyay Masuuliyiinta DFS.
Wafdiga uu hor kacayay Mr Major General David karunba ayaa waxa ay markiiba kulan dheer oo albaabadu u xidhan yihiin la yeesheen Labada Masuul ee kala ah Raisalwasaare Nuur Cadde iyo Afhayeenka Baarlamaanka Shiikh Adan Maxamed Nuur, waxana ay sheegeen dad xogaal ahi inay aad uga wada hadleen xidhidhka soo jireenka ah ee labadaasi Dalka ka dhexeeya waa Somaliya iyo Kenya iyo waliba xaalada dagaal ee wali ka oogan gudaha Dalka Somaliya.
Wararka ayaa iyana waxay sheegayaan inay waftigaas C/laahi Yuusuf ay dhanbaal uga sideen dhigiisa Dalka Kenya Mwikibaki dhanbalkaasi oo la sheegay in lagu wareejiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Sh. Adan Madoobe oo ha sii haya xilka Madaxwaynaha.
imaatinka waftigaas ayaa ku soo beegmaya xili uu Dalka dibada kaga maqan yahay C/laahi Yuusu Axmed oo sadex habeen ka hor si kadis ah dibada ugu duulay halkaasi oo la sheegay inuu xaalada Caafimaad u aaday.
Waftigaasi uu hogaaminayo Mr Major General ayaa waxa la cadeeyay inay saacadaha soo socda ay dib u noqon doonaan, sida uu sheegay Masuul ka tirsan dawlada Somaliya oo haatan ku sugan Magaalada Baydhabo.
« Puntland oo ka dhawaajisay inay ugaadhsanayso wariyaasha madaxbanaan
Diyaarad maalintii labaad dul hee haabaysa hawada sare ee Magaalada Buuhoodle »